Home अन्तर्वार्ता "मगर जातिभित्र भएको विविधतालाई सबैले बुझ्नुपर्छ विविधता समस्या भन्दा पनि सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ" - हर्क आलेमगर
नेपालको एक प्रमुख आदिवासी जनजाति समुदायको रुपमा रहेको मगर जातिको मातृभाषा धर्म कला र संस्कृतिको संरक्षण एवं संवद्र्धनको नाराका साथ हातेमालो अभियान नेपाल र नेपाल मगर लेखक सङ्घ गण्डकी अन्चल समितिको संयुक्त आयोजनामा यही पौष ३ गते पोखरा सभागृहमा प्रथम मगर चलचित्र अवार्ड एवं श्रष्टा सम्मान समारोह २०६७ हुने भएको छ। कार्यक्रममा देशभरिका मगरहरुको सहभागीता सहित विभिन्न क्षेत्रका मगर संस्कृतिहरुको जमघट समेत रहने जानकारी आयोजक दुवै संस्थाले दिएका छन्। साँस्कृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि समेत कार्यक्रम सहयोगी हुने दाबी आयोजकको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा रहेर सन्चारकर्मी एवं उक्त कार्यक्रमका संयोजक समेत रहेका हर्क आलेमगरसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
यहाँहरुले गर्न खोज्नुभएको कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम हो ?
वास्तवमा नेपाल एउटा बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक देश हो। यो देशमा भएका विभिन्न जातजाति मध्येमा मगर जाति नेपालको एक प्रमुख आदिवासी जनजाति समुदाय हो। अन्य आदिवासी जनजाति सरह मगर जातिको पनि आफ्नै मातृभाषा धर्म कला र संस्कृति छ। तर यसलाई राज्यले कहिल्यै पनि वास्ता गरेन। यसको संरक्षण र विकासमा कहिल्यै ध्यान दिएन। तसर्थ सम्पूर्ण मगरहरुको एकताका लागि पनि भाषिक साँस्कृतिक एकता अनिवार्य छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। र मगर जातिभित्र भएको विविधतालाई सबैले बुझ्नुपर्छ विविधता समस्या भन्दा पनि सम्पत्ति हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने नै यस कार्यक्रमको मुख्य सन्देश हो।
विविधता भन्नाले कस्तो खालको विविधता भन्न खोज्नुभएको ?
जसरी नेपालमा जातीय भाषिक साँस्कृतिक र धार्मिक विविधता छ त्यसरी नै मगर जातिभित्र पनि विविधता छ। स्थान विशेष अनुसार मगर जातिको संस्कृति भाषा र भेषभूषा फरक फरक भएको पाइन्छ। जस्तो अठार मगराँतको मगर भाषा धर्म र संस्कृति बाह्र मगराँतको मगर भाषा धर्म र संस्कृतिभन्दा अलि भिन्न छ। डोल्पाको मगर भाषा धर्म र संस्कृति पनि भिन्न खालको छ। तर आखिर जे जस्तो भिन्नता भएतापनि हामी सबै मगर हौं भन्ने भावनाको विकास गराउनका लागि पनि यो कार्यक्रम सहयोगी साबित हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
कार्यक्रमको तयारी कहाँसम्म पुग्यो ?
तयारीको समग्र स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामी अन्तिम चरणतिर आइपुग्दै छौं। अति तीव्रताका साथ हामीले तयारीलाई अघि बढाइरहेका छौं।
तयारीलाई यहाँहरुले कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?
तयारीको कुरा गर्दा हामीले कार्यक्रमको बारेमा विभिन्न मगर संघ संस्था देखि लिएर अन्य बुद्धिजीवि साचारकर्मी समाजसेवीहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। कार्यक्रमलाई कसरी सफल पार्न सकिन्छ भनेर उहाँहरुसँग हाम्रो अन्तरकि्रया पनि भइरहेको छ। हामीले एक महिना पहिले नै क्षेत्रीय स्तरको छलफल कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौं भने यस क्रममा हामीले विभिन्न जिल्लाहरुको पनि भ्रमण गरिसकेको स्थिति छ।
अहिलेसम्म कार्यक्रमको प्रचार प्रसारलाई कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?
कार्यक्रमको प्रचार प्रसारलाई त हामीले पहिलो प्राथमिकता नै दिएका छौं। मुख्यत यसको उद्देश्यबारेमा हामीले बढी नै जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने मान्यताका साथ विभिन्न जिल्लाहरुमा पुगेर त्यहाँका मगर संघसंस्थासँग बसेर छलफल अन्तरकि्रया पनि चलाइरहेका छौं। अहिलेसम्म हामी कास्की तनहुँ स्याङ्जा म्याग्दी पर्वत लमजुङ लगायतका जिल्लाहरुमा छलफल चलाइसकेका छौं भने केही दिनमै हामी दाङ रुपन्देही पाल्पा नवलपरासी रोल्पा रुकुम लगायतका जिल्लाहरुमा पनि पुग्ने तयारी गर्दै छौं। यसका साथै साचारजगत्को साथ र सहयोगलाई पनि हामीले भुलेका छैनौं। त्यसका लागि हामीले पत्रकार सम्मेलन र मोटरसाइकल र् याली गर्ने सोंच पनि बनाएका छौं।
कार्यक्रममा अवार्ड तथा सम्मानमा समेटिएका विधाहरु कुन-कुन छन् ?
कार्यक्रममा हामीले मुख्यत तीन वटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अवार्ड अर्थात् पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरेका छौं। चलचित्रतर्फ १६ विधामा अवार्ड दिइनेछ भने साहित्यमा ६ वटा विधामा सम्मान गर्ने भनेका छौं। त्यसैगरी संगीतमा पनि त्यसैगरी योगदानको आधारमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं। यसमा हामीले दीर्घजीवि सम्मान गर्ने पनि भनेका छौं।
कार्यक्रममा कत्तिको उपस्थिति हुने अनुमान गर्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम भएकाले सकभर सबै चलचित्रकर्मी साहित्यकार र संगीतकर्मी एवं कलाकर्मीहरुको जमघट हुने हामीले विश्वास लिएका छौं। मगर भाषा धर्म कला र संस्कृतिमा आधारित रहेर आफूलाई कला क्षेत्रमा समर्पित गरिरहनुभएका धेरै व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु सबैलाई सम्झने कोशीस हामीले गरिरहेका छौं।
कार्यक्रम गर्नुको मूल उद्देश्य के हो ?
मैले माथि नै पनि उल्लेख गरिसकें कि हामीले मुख्यत चलचित्रकर्मी कलाकार एवं स्रष्टाहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरुको सम्मान भनेको नै हाम्रो भाषा तथा संस्कृतिप्रतिको सम्मान हुन्छ। तसर्थ ओझेलमा परेका र बाध्यतावश कला साहित्य र संगीत क्षेत्रलाई त्यागेर बस्नुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरुलाई पुनर्जागृत गराउनु पनि यसको मुख्य कार्य हुनेछ। साथै विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न विधामा लागेका सबै मगर कलाकर्मीहरुलाई एकै थलोमा बसेर चिया खाने भाषा संस्कृतिको बारेमा कुराकानी गर्ने अन्तरकि्रया गर्ने वातावरणको सिर्जना पनि यो कार्यक्रमले गर्छ।
कार्यक्रममा कति खर्च र आम्दानी हुने अनुमान गर्नुभएको छ र खर्च कसरी जुटाउनुभएको छ ?
खर्चको कुरा गर्नुपर्दा हामीले करिब सात लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छौं। हामीले विभिन्न सरकारी निकाय मगरसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुमा सहयोगको लागि अनुरोध गरेका छौं। हाम्रो कार्यक्रम नै गैर नाफामूलक भएकाले नाफाको आशा चािहं गरेका छैनौ।
कार्यक्रमप्रति मगर जाति अनि अन्य आदिवासी जनजातिको प्रतिकि्रया के छ ?
वास्तवमा हामीले गर्न लागेको कार्यक्रमलाई धेरैले सकारात्मक अनि प्रशंसनीय कार्यको थालनी भन्नुभएको छ। अन्य आदिवासी जनजाति मात्रै नभएर गैर आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरुले समेत ऐतिहासिक कार्यक्रम गर्न लाग्नुभएको रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरुको सकारात्मक प्रतिकि्रयाप्रति हामी पनि खुशी छौं।
अन्त्यमा यस वेबसाइटमार्फत् के भन्नुहुन्छ ?
आवाजविहीनहरुको आवाज बनेर साचार क्षेत्रमा नयाँ आयाम लिएर निरन्तर अपडेट हुँदै आएको यस वेबसाइट मार्फत् म देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण मगर लगायत आदिवासी जनजाति समुदाय र अन्य गैर आदिवासी जनजाति समुदायलाई समेत कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आग्रह गर्दछु। कार्यक्रम मगर जातिका लागि मात्रै नभएर राष्ट्रको साँस्कृतिक उन्नयनका लागि समेत महत्वपूर्ण भएकाले सबैलाई आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विभिन्न क्षेत्रमा लुकेर रहेको मगर प्रतिभाहरुलाई गर्ने एउटा राम्रो अवसर पनि भएकाले यस कार्यमा साथ दिन म सम्पूर्ण मगर लगायतका आदिवासी जनजाति दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि हरेक मगर चलचित्रकर्मी कलाकार एवं श्रष्टाहरुले तुरुन्त सम्पर्क राख्नका लागि पनि म देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्दछु। साथै मलाई यस वेबसाइट मार्फत् हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा आम पाठक एवं दर्शकहरुलाई जानकारी गराउने सुअवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद र वेबसाइटको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।